Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo goordhaw la doortay – Kalfadhi
Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed) ayaa ku guuleystay Xilka Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland, kadib markii Wareegii Labaad ee Doorashada uu helay codad gaaraya ilaa 43 cod, isaga oo doorashada uga guuleystay Cabdi Jamaan Cusmaan, oo kula tartamaya Wareegga Labaad ee Doorashada.
Wareeggii Koowaad ee Doorashada waxaa galay afar musharax oo u tartamayey xilka Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Puntland, waxaana codeeyey 66-ka Xildhibaan ee uu ka kooban yahay Golaha.
Natiijada Wareegga Koowaad ee Doorashada ayaa ku dhamaaday Cabdirishiid Yuusuf Jibriil oo helay 5 cod, Cabdirahman Ali Jibriil oo helay 9 cod, Cabdijamaan Cusmaan oo helay 15 cod iyo Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed) oo ahaa Musharraxa ugu cododka badnaa Wareegga Koowaad ee Doorashada oo helay 37 cod.
Musharraxa helay codadka ugu yara doorashada ayaa ku haray wareegga koowaad, waxaana sidoo kale ka tanaasulay in uu galo Wareegga Labaad ee Doorashada Cabdirahman Ali Jibriil oo helay 9 cod. Saasdaraadeed, waxaa sidaas ugu soo gudbay wareega ugu dambeeya ee doorashada Cabdijamaal Cusmaan iyo Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed).
Wareegii Labaad ee Doorashada waxaa ku guuleystay Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), oo helay 43 cod oo kamid ah 66-ka cod ee Xildhibaannada codeeyey Wareega Labaad ee Doorashada Guddoomiyaha, halka Musharraxa laga guuleystay, Cabdijamaal Cusmaan, uu helay 23 cod.
Guddoomiyaha Ku-meel-gaarka ah ee Golaha Wakiillada Puntland ayaa ku dhawaaqay in Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed) uu ku guuleystay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland, shanta sano ee soo socota.
Cabdijamaal Cusmaan, oo ah Musharraxa looga guuleystay doorashada ayaa madasha ka sheegay in uu u hambalyeynayo Guddoomiyaha cusub ee Golaha ee kaga guuleystay doorashada, waxaana uu kula dar-daarmay in uu ku shaqeeyo dhammaan sharciyada iyo xeer hoosaadka u yaala Baarlamaanka Puntland.
Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Wakiilada ee Puntland, Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), ayaa u mahadceliyey Guddiga Doorashada Guddoonka, Musharraxiinta, Xildhibaannada, Korjoogtada Doorashada Guddoonka Golaha iyo Xubnaha Baarlamaanka ee ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in guushan ay uga dhigan tahay sidii isbadal muuqda uu ugu horseedi lahaa Golaha Wakiillada Puntland, waxaana uu balan qaaday in uu ka shaqeyn doono sidii loogu dhaqmi lahaa sharciga iyo xeer hoosaadka, loolana xisaabtami lahaa Xukuumadda Puntland.
Doorashada Guddoomiye Kuxigeennada Koowaad iyo Labaad ee Guddoonka Golaha Wakiillada ayaa goordhow bilaabmi doonta, sida uu sheegay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Guddoonka Golaha.
Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Wakiillada Puntland oo la doortay